1 Hichapụ akporo ekwentị
2 Hichapụ Android Tablet
3 kpamkpam ihichapu Android
4 Hichapụ Android Remotely
7 ihichapu Android SD Kaadị
8 ihichapu Android History
9 Hichapụ Android Ozi
Chọrọ na-ere, inye ma ọ bụ egweri gị ochie Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba? Ị ga-chọrọ ka ihichapụ ihe niile na ya iji na-gị onye data mma ma chekwaa ya. Ebe a, ga-amasị m na-agwa gị 4 ụzọ na-ehichapụ data na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Na-agụ na na-ahụ ụzọ kasị mma na-gị onye data mma n'agbanyeghị nke aka ya adaghị.
Method 1. Nanị Ihichapu akporo ekwentị ma ọ bụ Tablet
Method 2. Do Factory Tọgharia ihichapu Data na gị akporo ekwentị ma ọ bụ Tablet
Method 3. Ofụri Esịt Hichapụ akporo ekwentị ma ọ bụ Tablet. Ọ Dịghị Ihe Pụrụ-natara
Method 4. Ime Hichapụ akporo ekwentị ma ọ bụ Tablet
Ekele Android na-emeghe ọdịdị, ị nwere ike mfe ihichapu kọntaktị, foto, ozi, ngwa, music, video, oku na ndekọ na akwụkwọ faịlụ site na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. I kwesịrị ime ihe ọ bụla ma na-emeghe ngwa aha dị ka ana-akpo, osisi, dekọọ, Ozi (Izi ozi), Video, Music na ndị ọzọ. Na-ahụ gị na-achọghị faịlụ na ihichapụ ha.
Easy ka ihichapụ
1. Wepụta ọtụtụ nke oge
2. The ehichapụ faịlụ ndị mfe-natara. Lee otú naghachi ehichapụ faịlụ site Android >>.
Factory nrụpụta a usoro eleghị anya ị na-eji mgbe ị chọrọ ire ere, inye ma ọ bụ egweri gị ochie Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. I chere na ị ehichapụkwa ihe niile na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na-adịgide adịgide site na-eme a factory nrụpụta. N'ezie, ọ bụghị. Factory Tọgharia adịghị ihichapu niile data na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Ka njọ, data ọ deletes bụ ngwangwa ụfọdụ mgbake ngwaọrụ na ike-natara mfe.
Mgbe niile, ma ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie ka ehichapụkwa Android data site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nrụpụta, ị pụrụ ịgbaso nzọụkwụ n'okpuru. Na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba, na-aga Ntọala> Tọgharia> Factory data nrụpụta.
Cheta na: Tupu eme factory nrụpụta, ị ga mma ndabere gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na-data nchebe.
Ihichapu ọtụtụ n'ime data na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba
1. bụghị kpamkpam ehichapụkwa Android data
2. The ehichapụ faịlụ ndị mfe-natara
Iji hichapụ Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba kpamkpam, ndị kasị mma oke bụ ise nkwado si ọkachamara Android wiping ngwá ọrụ. Wondershare SafeEraser dị otú ahụ a ngwá ọrụ nke na-enye gị ka ị na-ehichapụkwa ihe niile na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Ọ dịghị ihe dị recoverable.
Nzọụkwụ 1. Download na wụnye Software na gị Windows PC ma ọ bụ Mac
Na-amalite na, download nri version nke Wondershare SafeEraser na gị Windows PC. Na-agba ọsọ ya. Jikọọ Android ngwaọrụ na kọmputa na iji eriri USB. Biko nwee USB Debugging Mode na gị android ngwaọrụ mgbe ejikọta.
Nzọụkwụ 2. Pịa na ihichapu niile Data na interface. Ibà "Hichapụ" na window n'ịkwado iji na pịa ihichapu Ugbu a ịkwaga na
Nzọụkwụ 3. Mgbe ahụ usoro ihe omume ga-amalite erasing niile data na Android ngwaọrụ, gụnyere music, videos, photos, kọntaktị, ngwa ọdịnala, wdg
Nzọụkwụ 4. Mgbe usoro na-okokụre, na-eso ntụziaka na omume na enweta na Factory Data Tọgharia ma ọ bụ Ihichapu ọdịnaya niile na ngwaọrụ na-ehichapụ usoro ntọala.
Uru: Zuru ehichapụkwa na Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Ọ dịghị ihe dị recoverable. Cons: bụghị free.
N'ihi na egwu na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba ga-zuru, na nzuzo gị nwere ike na-tọhapụrụ? Jiri ya nwayọọ. E nwere ọtụtụ ngwa ọdịnala nke nwere ike hichaa Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba remotely. N'etiti ha, Android Ngwaọrụ Manager guzo. Nke a smart ngwa na-kere Google, nke na-enyere gị aka ehichapụkwa niile data na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba, tọgharịa mkpọchi ihuenyo paswọọdụ, na soro ala ọnọdụ nke gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba.
Lee otú iji Android Ngwaọrụ Manager >>
Uru: Remotely ehichapụkwa Android data cons: The ehichapụ data pụrụ ịbụ ngwangwa ụfọdụ mgbake ngwá ọrụ.
Bugharịa ọdịnaya site Android ka iPhone
Top 10 Android Desktọpụ Managers
Android Update Manager Ịlụ Mma Performance
Android USB File Nyefee
Android WiFi File Nyefee
Top 7 Android Photo Manager maka Ị
Nyefee faịlụ site Nokia ka Android
Manager égwu na gị android ngwaọrụ
Top 6 Android Custom ROMs: erite Ọzọ na mma na gị android ngwaọrụ
Otú nyefee iCloud Ndi ana-akpo ka Android
Otú nyefee ozi site na Samsung ka Samsung
6 kasị akpali akpali atụmatụ maka Android 5.0 Lollipop Ị Pụrụ Ịbụ na Mara
Olee otú Naghachi ehichapụ Ndi ana-akpo si HTC One
Otú nyefee na Ọkụ Android Video ka DVD
Get The Best Video Player Play Video on Android
Akwado Video Formats maka Android - Non Official Document
> Resource> Android> 4 Ụzọ na-ehichapụ akporo ekwentị ka e meere gị Nzuzo